प्रकार सी USB को दृष्टि मा OnePlus2नयाँ सार्वभौमिक मानक को कनेक्टर हो? | Androidsis
क्रिस्टिना टोरेस प्लेसहोल्डर छवि | | मोबाईलहरू
पक्कै पनि तपाईंले उहाँबारे धेरै चोटि सुन्नुभएको छ। वास्तवमा, यो भविष्यको चार्ज र डेटा मानकको रूपमा देखा पर्‍यो। हामी पाठ्यक्रम को सन्दर्भ USB प्रकार सी कनेक्टर। यद्यपि यो कनेक्टर हो कि अरू सबै प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ मानिन्छ, र पनि एप्पल कि सधैं आफ्नै तरिकाले यो नोटबुक को नयाँ श्रृंखला मा राख्न छनौट गरेको छ, क्षण को लागी, हामी यस मा एक व्यावहारिक चासो देखेको थिएन। म यसलाई प्राय टर्मिनलमा समाहित गर्ने तथ्यलाई सन्दर्भित गर्दैछु। कम्तिमा अहिले सम्म छैन। सुविधाहरूमध्ये जुन नयाँ जेनरेशन वनप्लसले प्रस्तुत गर्दछ, त्यो हो वनप्लस २ टर्मिनल, यस्तो देखिन्छ कि यस प्रकारको सम्बन्ध तिनीहरू बीच हुन जाँदैछ।
वास्तवमा, वनप्लसले तपाईंले यी लाइनहरूमा हेर्ने छवि प्रकाशित गरेर त्यो सम्भावनाको घोषणा गरेको छ। तर के यसको मतलब यो छ कि संभावनाहरू एक भित्रमा केही वर्षको प्रकार C USB लाई हेरौं मानक बढेको रूपमा? वास्तवमा होइन। टेक्नोलोजीको संसारमा यो पहिलो पटक हुनेछैन कि उच्च गुणस्तरीय नयाँ मापदण्डले आफूलाई थोप्न असफल भएको छ। यद्यपि हामीले केही वर्ष पछाडि फर्काउनुपर्दछ जुन मँ दिन लागिरहेको छु उदाहरणका लागि, जुन विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरिन्छ र इतिहास सँधै आफैंलाई दोहोर्याउँदछ, यो VHS र Betamax को साथ भयो। के यूएसबी टाइप सी बर्बाद छ वा हामीले भर्खर समय र नयाँ पुस्तालाई पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर पर्खनु पर्छ?
सत्य यो हो कि माइक्रो-यूएसबी धेरै कारणहरूको लागि एक सुधार जडान हो। धेरै विशेषज्ञहरू समस्याहरूको धेरै दोष दिन्छन् कि समाधान हुन्छ एक प्रकार C USB लाई समाहित गर्दै। तर यो पनि कम सत्य हो कि प्रविधि पहिले नै उच्च प्रजातन्त्रतामा रहेको छ, सबैलाई होइन, वा कमसेकम बहुमतले पनि नयाँलाई समावेश गर्ने बारेमा धेरै चिन्तित छ। यो जस्तो देखिएको, र त्यहाँ सयौं माइक्रो-यूएसबी निर्माताहरू, साथ साथै मध्य-दायरा टर्मिनलहरू छन् भनेर जानेर, टाइप सी यूएसबी योजना धेरैले सोचे भन्दा बढी ढिलाइ हुन सक्छ।
वास्तवमा, म विश्वस्त छु कि OnePlus2ले यो घोषणामा लिएको छ प्रकारको सीएसबी यसको मुख्य जडानमा समावेश गर्दछ यो महत्वपूर्ण छ र जडानको पक्षमा स्कोरहरू। मलाई थोरै शंका छ कि बाँकी निर्माताहरूले कम्तिमा तिनीहरूको उच्च दायरामा, यसलाई समावेश गर्दैनन्। वास्तवमा, यस्तो सम्भावना छ कि अर्को संस्करणहरूमा हामी उनीहरूलाई मास्सामा देख्नेछौं। के मलाई धेरै स्पष्ट छैन के सबैजनाले उही गर्छन र उच्च कम्प्युटरको साथ कम र मध्यम दायरा सुरू गर्ने समान कम्पनीहरूले उनीहरूको सबै टर्मिनलहरूको लागि समान प्रणाली पछ्याउँदछ भने पनि। के टाइप सी यूएसबी केवल उच्च-अन्त को लागी वा उपकरण लाई औसत माथि परिभाषित गर्न सुविधाहरु सम्मिलित एक जडान बन्ने छ? यो हो कि हुन सक्छ।
यो स्पष्ट छ कि केवल समयले देखाईनेछ कि किसिमको प्रकार C USB कनेक्शन वर्तमान व्यक्तिको सार्वभौमिक प्रतिस्थापन हुनेछ। र यो पनि सत्य हो कि यदि यो एक मानकको रूपमा कायम गरीन्छ र एप्पल आफैंले पनि यसमा सामेल हुन्छ भने उपभोक्ताहरू यस विषयमा ठूलो फाइदा लिनेहरू हुनेछन्, किनकि उही चार्जरले सबै चीजको लागि प्रयोग गर्दछ। तर अहिलेको लागि, सबै कुरा एकमा छ हामी हेर्नेछौं कि सबै विशेषज्ञहरू स्पष्ट छैनन्। तपाईलाई के लाग्छ भविष्यको भविष्य हुन्छ प्रकार सी USB?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » प्रकार सी USB को दृष्टि मा OnePlus2नयाँ सार्वभौमिक मानक को कनेक्टर हो?
letv पछि दोस्रो मोबाइल यो गर्न को लागी
माइक्रोसफ्ट अफिस आधिकारिक रूपमा एन्ड्रोइड मा जारी गरियो